Qeybta 1: Waa maxay sababta loogu badalo mts in MOV on Mac
Qeybta 3: Isticmaal free video Converter sida mpeg il clip
In ay mid ka mid ah qaabab ugu caansan MOV ayaa suuqa hubaal qaaday duufaanka. Ay caanka ah ee qaabka ka mid ah dadka isticmaala weyn oo waxay jecel yihiin inay badalo iyo wadaagaan files isticmaalaya qaab this. Waxaa sidoo kale in la xuso in ciyaaryahanka ugu fiican MOV waa markii si degdeg ah oo qaab taas waxaa ka go'an in tiro badan oo ah dadka isticmaala oo dhan waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in dadka isticmaala ay karaan in ay hesho natiijooyinka ugu fiican sida ay sidoo kale waxaa taageeraya awood iyo caan. Tani waa summad ka tiga ee shirkadda oo ay ku hawlan yihiin sidii loo hubiyo in ay caanka ah ee qaab kor.
Part1: Waa maxay sababta loogu badalo mts in MOV on Mac
Jawaabta su'aashan waa run ahaantii fudud oo ka kooban tahay xaqiiqda ah in faa'iidooyinka qaab MOV way waaweyn yihiin oo lagu raaxaysan karaa by users haddii ay ogaadaan sida ay u ilaaliyaan oo ay isticmaalaan qaab la daryeelka iyo kaamilka ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in qaabka loo yaqaan ee cajalado ugu fiican oo tafatir ah waa mid aad u fudud oo toos ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in su'aasha ah in la soo codsaday ee qaybtan sidoo kale waxaa loola jeedaa faa'iidooyinka qaab sababtoo ah qaab lagu bedeli lahaa in kale, haddii faa'iidooyinka waxaa loo yaqaan iyo user wuxuu heli karaa natiijada ugu wanaagsan wax waqti ah gudahood oo dhan. Ka dib waa labada ugu sareysa faa'iidooyinka ugu badan ee diinta MOV si Mac fudayd iyo qanacsanaanta,
Ahaanshaha qaab multimedia ah MOV dukaamada content audio iyo video files ee gaar ah iyo sabab la mid ah waxaa sidoo kale in la xusay in waxyaabaha la si gooni gooni ah maasuqay karo si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo si sahlan iyo maqal ah ee video yahay waa saxar ah oo waafaqsan shuruudaha isticmaala. Audio ayaa la musuq maasuqay karo iyada oo aan taabashada track video iyo qeybsanaan ku xigeenka. Sidaas awgeed waa in mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loo hubiyo in ugu wanaagsan waxaa laga codsadaa in qaabka aan shaqada badan.
MOV waa qaabka ugu fiican in si fudud la socotid barnaamijyada kale ee fudayd iyo qanacsanaanta iyo sabab la mid ah waxaa sidoo kale in la xusay in user ku isticmaali kartaa qaab la barnaamijyo kale sida PowerPoint si loo hubiyo in dhawaaqa ama videos yihiin waa ciyaaray sida pass qoraalka ay. Waa mid ka mid ah hababka ugu fiican si loo hubiyo in saamaynta waxaa lagu daray bandhigyo siiyo user ugu fiican iyo natiijada ugu fiican ee abaal gudahood markii lahayn, oo aan wax dadaal dheeraad ah sida barnaamijyada kuwaas oo sidoo kale taageeri qaab MOV ah.
Waxaa sidoo kale in la ogaadaa in ay tahay qaabka ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo in qalabka warbaahinta iyo sidoo kale waa ay caanka ah mar walba sii kordheysa ee qaabka uu u suurta isticmaala si loo hubiyo in qaabka loo isticmaalaa ku dhufto ee kale sidoo kale. Si aad u dhigayaan, waxa fudud ku dhufto ee kale ayaa sidoo kale la hubiyo in qalabka iyo farsamooyin lagu horumariyo si ay u hubiyaan in qaab la ciyaaray waxaa sidoo kale aan wax arrintan iyo dhibaato.
Ka dib waa tallaabooyinka la xidhiidha Wondershare Video Convertor Ultimate u Mac sida ay tahay mid aad u fudud in la isticmaalo:
Laga soo bilaabo URL http://www.wondershare.com/mac-video-converter-ultimate/guide.html barnaamijka waa in lagala soo bixi iyo marka la sameeyo ka dib markii uu bilaabay user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in badhanka dar files yahay riixi si loo hubiyo in files waxaa lagu daray barnaamijka:
Arrow ayaa waxaa ka dibna in la riixi u muujiyo muuqaalada dheeraad ah oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in qaab la doonayo la doorto:
Button diinta waxaa markaas in la sii adkeeyey dhammayn nidaamka iyo bilowdo celiyaa,
Part3: Isticmaal free video Converter sida mpeg il clip
Si aad u hubiso in clip webigu waxa loo isticmaalaa user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in geedi socodka soo socda waxaa la socda:
Copy DVD in ay drive nidaamka adag ee
Barnaamijka waxaa markaas in la bilaabay ka dib markii lagala soo http://download.cnet.com/MPEG-Streamclip/3000-2140_4-51380.html
File> Open Files ah jidka si aad u hesho DVD badbaadiyey:
Files ayaa si toos ah loo doortay,
Quicktime dhoofinta waxaa markaas waa in la soo xulay:
Goobaha wax soo saarka waxaa ka dibna in la doortay si ay u hubiyaan in tayada waa sii kordhay,
The button movie samaynaysaa waxaa markaas in la sii adkeeyey si loo hubiyo in nidaamka halkan hasa
Sidoo kale waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad u hubiso in qaabab waxaa lagu bedelay ama badaley. Ka dib waxaa hanaanka arrintan la xiriira:
URL ayaa http://www.online-convert.com/ waa in la soo booqdo si ay u helaan qalab online:
Diinta ayaa si MOV waa in lagu soo xulo si loo hubiyo in hannaanka horumarka,
File ayaa markaa waa in la uploaded sida bogga xiga ku yimaado iyo goobaha wax soo saarka ayaa sidoo kale loo dhigo si loo hubiyo in ugu fiican ee la doorto:
The button file diinta waxaa markaas in la sii adkeeyey si loo hubiyo in nidaamka halkan dhamaado iyo waxa ay sidoo kale bilaabi doonaan in diinta loogu user:
Waxaa sidoo kale in la xuso in sida ugu fiican si loo hubiyo in qaab la ciyaaray waa in la hubiyo in buugaagta Mac iyo desktops waxaa loo isticmaalaa in la sameeyo baahan yahay si ciyaaro qaab marna waa arin dhamaan qof kasta. Waxaa jira dhowr ah kuwan raadkaygay in loo qori karaa si ay u hubiyaan in qaab MOV la riyaaqay iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in user ayaa sidoo kale si fudud edit karaa oo bedeli isha qaabka aan u muqato code ah kaas oo qaar ka mid ah u tartameen sidoo kale ma samayn taageeraan oo waxaa si weyn loo arkaa kartaa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu fiican ee qaab MOV.
> Resource > Beddelaan 3> siyaabo si loogu badalo mts in MOV on Mac